Blockchain News 26 EyoMqungu 2018 - Blockchain News
EyoMqungu 26, 2018 admin
Blockchain News 26 EyoMqungu 2018
BitGo ukuzuza inkampani trust olulawulwayo ngokupheleleyo phezu $ 12B zempahla
BitGo, phambili izisombululo zokhuseleko kwemali digital kubatyali-mali yamaziko, wavakalisa ukuba ingene kwisivumelwano esichazayo ukufumana Kingdom Trust Company, a Dakota South – inkampani trust nezilawulwa ngokupheleleyo phezu $12 billion ngo-asethi. Bethenga ziphantsi kwemiqathango yesiNtu wokuvala neemvume zommiso.
"Iimarike Global zemali Ndilangazelela ukuba isiphelo-to-ekupheleni isisombululo idini ubuchwepheshe ukukhusela nemali yedijithali kwakunye wezomthetho kunye nokuthotyelwa ilawula kuyimfuneko ukuba nokuzibuyisela iipotfoliyo zemali esiqhelekileyo"
Trust Kingdom uyahlangabezana nazo zonke iimfuno esebenzayo of Revenue Code Internal 408 ukuba bakhonze, njengomlondolozi qualified njengoko kuchaziwe kwi kwaba Bacebisi Investment Act of 1940. Iinkonzo onelungelo ezinikezelwa yi inkampani kuthenjwa, kunye lwemali yedijithali software BitGo lungakhuseleki yokhuseleko, uya kwenza le nkampani ezidityanisiweyo kuphela ngokupheleleyo-beka, xa umniki isikali ukhuselo obekelwe kunye intanethi-mali lwemali yedijithali agcinwe abatyali-mali yamaziko.
“BitGo kunye boBukumkani ukwakha iimveliso kwixesha elizayo – batshata ubugcisa obutsha kunye ukhuseleko nolawulo bonke abatyali zifuna.”
izilingo Kazakhstan ukuhlawula zezohlwayo zendlela ne Bitcoin
Kazakhstan enza kube lula ukuhlawula zezohlwayo zendlela ne cryptocurrency. Isicelo kunye nenkonzo OKauto.kz mobile sele sivavanyiwe ngempumelelo ngomnye bemeko- isicelo – ali Shaykhislam. kunjalo, ababhali nkonzo gxininisa ukuba umsebenzi omtsha lusasebenza kwi kwindlela yovavanyo.
Abenzi bemeko ye ndaqonda amathuba ukuhlawula imali karhulumente iphula imithetho yendlela kwi cryptocurrency of bitcoin.
Le app free esibonelela ngenkonzo ukungqinisiswa izaziso ze kuwiswe ezikhutshiweyo, phakathi kwezinye izinto.
Kubangel 'umdla ukwazi ukuba akukho ubume esemthethweni cryptocurrencies ku Kazakhstan, ukuba akuthathwa imali okanye izixhobo zemali.
cryptocurrency Russian somthetho oyilwayo
I-Russian Ministry of Finance lapapasha bill “On Digital asethi eziyimali”, equlunqelwe ukuba semthethweni cryptocurrencies eRashiya.
I-Ofisi yoMphathiswa wezeMali ibhekisela asethi zemali digital “impahla nge-elektroniki, wadala ngokusebenzisa ufihlo (lokufihla) ithetha.”
Unakho ukutshintsha imiqondiso olunye cryptocurrency okanye engange kuphela ngokwabelana ezizodwa – “abaqhubi ukutshintshiselana asethi digital zemali”.
Kuphela iziko elisemthethweni elibhaliswe eRashiya, kunye nokugcina imithetho Akukho. 39-FZ “Emakethe izibambiso” okanye No. 325-FZ “Kuhlelwa abathengisa” abe mqhubi.
Inkqubo ukuvula nokugcina ii-akhawunti kufuneka emiselwe yi-Central Bank.
Umlawuli ufuna ukuthenga kuphela wemiqondiso ukuba iinkampani zisebenzisa ukuze kunyuswe ingxowa-mali engange, ilumkisa Ministry of Finance.
Ubulungiseleli ukholelwa ukuba akunakwenzeka ukuba ukunqanda ukuthenga zisaqhubeka cryptocurrency, ngokuba emthethweni msebenzi ngeke “hambisa” kwimakethi.
Kwakhona ku xwebhu kukho inkcazo kwezivumelwano smart kunye nezimbiwa, egqalwa inkqubo yoshishino ukuba indalo okanye ukuqinisekiswa kwe cryptocurrency ukuze afumane imbuyekezo. Yintoni iirhafu ziya kutsalwa kwi imisebenzi zabasebenzi basemgodini, alukhankanywanga.
Ukuba uxwebhu udlula ukufundwa ezintathu State Duma, kwaye ufumana imvume yeBhunga Federation kunye utyikityo lwe ngumongameli Russian, uya kunyanzeliswa 90 iintsuku emva kokupapashwa kwayo esemthethweni. Lo Mthetho osaYilwayo ingalungiswa ngexesha iingxoxo kwipalamente.
Blockchain News 13 EyoMqungu 2018
ummi woMzantsi Korean ...
Indlela Cryptocurrency M ...
Yintoni cryptocurrency ukuba abatyali bayacetyiswa ukuba athengise, yaye nguwuphi ukuze ugcine?
Ukuphela May puzzl ...
Post Previous:Sezibalo kubalwa amaxabiso bitcoin ngenxa 2018
Post Next:Chainalysis – yinkampani owatshabalalisa ukungaziwa Bitcoin